Bhaka inkukhu multivarka ngezindlela ezihlukahlukene. Namuhla sibheka indlela elula futhi engavamile kakhulu kuhilela ukusetshenziswa wonke yenkukhu izidumbu futhi izithelo namanzi ezivuthiwe.
Inkukhu ephekwe multivarka: iresiphi for isidlo esihlwabusayo
elikhulu Quince fresh - 1 pc.
chilled lonke inkukhu - 1 pc.
garlic ezincane - 2 clove;
apula eliluhlaza - 1 pc.
red pepper - 2 Eluma;
Basil omisiwe - 1 spoon ezinkulu;
usawoti iodized, emihle - spoon elincane;
isilinganiso okuqukethwe imayonnaise amafutha - 2 nezinkezo ezinkulu;
uju fresh - 15 g
Ngaphambi inkukhu Bhaka multivarka, kumelwe sithengwe sisonke lilimale, wageza kahle ngaphakathi nangaphandle, bese uyakunquma zonke izakhi ezingenasidingo (umsila, amathiphu wamaphiko, entanyeni, njll).
Baked inkukhu (inamba) etholwe multivarka juicier kakhulu futhi kwanelise uma pre yokulahla izithelo zawo sezivuthiwe. Kunconywa ukusebenzisa quinces kanye apula amnandi. Badinga ukuba wageza, usike ekamu futhi ususe zonke izimbewu, Isiqu futhi izakhi eqinile.
Ukubhaka inkukhu okumnandi multivarka, kufanele bame amahora amaningana i sauce elimnandi. Ukupheka ke uzodinga ukuthatha isitsha esincane, wafaka usawoti iodized, imayonnaise lokucuketfwe fat Ngokwesilinganiso, lime fresh noma nokunye okufana nokolweni uju, garlic yashizi, Basil omisiwe upelepele obomvu. Zonke izinongo kanye nemikhiqizo ziyadingeka uhlanganise ngesipuni esincane, bese uqhubekela phambili ukwakheka ngokushesha izitsha.
Ngaphambi alahle izidumbu inyoni nge izithelo ezisanda kukhiwa, kumele kube kuhle smear ngaphambilini walungisa sauce. Lokhu kumele kwenziwe kokubili ngaphandle nangaphakathi. Ngokulandelayo, sidinga indlela push esiphezulu tibia izidumbu bese beka izithelo imibengo kwizigamu wakhe. Ukuze ukunambitheka ngaphezulu bangaba nobuhlobo naye babe pre-elingenamikhono ngoju. Ngemva kwalokho, imbobo inkukhu efiselekayo zashpilit asikiweko ukuthi ngesikhathi turning izithelo inyama akuyona achithekile.
Ukubhaka inkukhu multivarka, ebusweni isitsha ayidingekile zimanziswe ngamafutha noma amafutha. Engeza umhluzi ukuze inyama akulona kunomvuzo, ngoba kumele uzilungiselele juice siqu. Ngakho, isidumbu ezazigxishwe izithelo kufanele sibeke ngokucophelela emgqonyeni, eguqa umlenze wakhe futhi amaphiko uma kunesidingo. Ukupheka yenkukhu okungcono batch mode. Ukuqala multivarku ufuna ukufaka ncamashi engu-30, futhi lolu cingo kufanele livulwe ngemuva kwalesi sikhathi, ujike isidumbu phesheya ubhake ncamashi ngendlela efanayo isigamu sehora.
Indlela yokufaka isicelo eyodla
Ngemuva kwemizuzu engu-60 inkukhu ezazigxishwe izithelo kufanele kube nezitini ngokugcwele futhi kancane embozwe uqweqwe segolide. Kuyadingeka ukuba uthole ngokucophelela ngaphandle lwesitsha kanti indawo yonke ifomu ipuleti esikhulu. Khonza lokhu isidlo esishisayo efiselekayo kakolweni nesinkwa kanye dish side of imifino, okuyinto zazibekwa isidumbu.
A ezihlukahlukene zokupheka kulungiselelwa carp
Material flow Logistics: i Uhlolojikelele, izici, izinhlobo kanye izikimu
Inkimbinkimbi yokumaketha kanye nezingxenye zayo njengendlela ephumelelayo yokwandisa ukuthengisa nezinzuzo zenkampani.
Kanjani ukuqala ibhizinisi Ihhotela: business plan, amacebiso awusizo
Salad "uMongameli": iresiphi
MAZ 537: isithombe. MAZ 537 ("Isiphepho"): izincazelo
Ukunyakaza okungahambelani. Izifo zesimiso sezinzwa
Izigaba yentuthuko kwengqondo njengoba isayensi kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube namuhla